संविधान दिवसको अवसरमा नेपाल टेलिकमले ल्यायो नयाँ अफर | Ratopati
सोमबार १० कात्तिक, २०७७ Monday, 26 October, 2020
संविधान दिवसको अवसरमा नेपाल टेलिकमले ल्यायो नयाँ अफर
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeअसोज १, २०७७ chat_bubble_outline0
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले असोज ३ गतेको संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) को अवसरमा विभन्नि अफरहरु सार्वजनिक गरेको छ । टेलिकमले बुधबार अनलिमिटेड युट्युब अनलिमिटेड फेसबुक र एड–अन प्याक उपलब्ध उपलब्ध गराउने भएको हो । यही असोज २, ३ र ४ गते अनलिमिटेड युट्युब तथा अनलिमिटेड फेसबुक प्याक छुट्टाछुट्टै रु. ५५ प्रति प्याकमा खरिद गरी खरिद गरिएको मितिबाट ३ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
यस्तै अनलिमिटेड युट्युब र अनलिमिटेड फेसबुक प्याकमध्ये कुनै एक प्याक खरिद गर्ने ग्राहकले एड–अन प्याकको रुपमा रु. १५ मा १ जीबी डाटा प्याक खरिद गरी डाटा प्रयोग गर्न सकिने सुविधा समेत उपलब्ध हुने टेलिकमले जनाएको छ । यो प्याक पनि खरिद गरेको मितिबाट ३ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने जनाइएको छ ।
हाल समर अफर अन्तर्गत २८ दिनको समयावधि हुने १ जीबी पर डे डाटा प्याक रु. ८५० मा उपलब्ध भइरहेकोमा संविधान दिवसको अवसरमा यसमा ३४.७ प्रतिशतको भारी छुट प्रदान गरिएको छ । सो अनुसार यो प्याक २०७७ असोज २, ३ र ४ गते जम्मा रु. ५५५ मा उपलब्ध हुन टेलिकमले जनाएको छ ।
संविधान दिवसका अवसरमा उपलब्ध गरिएका अफरहरु *1415*11# डायल गरी प्राप्त गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ ।
एक्साइड ब्याट्रि नेपालमा रिटेलरहरुको पहिलो रोजाई
दसैंमा खल्तीले ल्यायो दुई जोडीको लागि माउन्ट एभरेष्टमा ब्रेकफास्ट अफर
एनसेलको ‘इन्डलेस कुराकानी प्लस’ अफरमा अफनेट र अननेट कल शुल्क घट्यो
सिटिजन्स बैंकको ‘डिजिटल दक्षिणा दिऊँ, क्यासव्याक लिऊँ’ योजना सार्वजनिक
इन्टरब्राण्ड २०२० को ग्लोबल ब्राण्ड श्रेणीअन्तर्गत हुण्डाई मोटर सर्वोत्कृष्ट पाँच अटोमोटिभ ब्राण्ड बन्न सफल
यती एअरलाइन्सको दसैँ अफर : एक जोडीलाई काठमाडौँ–अवुधावी निःशुल्क टिकट
ललितत्रिपुरसुन्दरीको काशीमा कीर्तिस्तम्भ
त्रिपुराकोटमा दसैँको जमरा टीका लगाउने आफ्नै साइत
कोरोनाकालको दसैँ, तस्विरमा हेर्नुहोस्
शिक्षकबाट राजीनामा दिएर बगरमा केरा फलाउँदै
कोरोनाविरुद्धको खोपबारे फैसला डिसेम्बरसम्ममा : फाउची
विवाह बन्धनमा बाँधिदै ‘कुछ कुछ होता हे’ का साइलेन्ट सरदार
कोरोनाको फैलावट रोक्न स्पेनले लगायो देशव्यापी कर्फ्यू
चिनियाँ राजदूतको स्वरमा सुन्नुहोस् ‘रेशम फिरिरि’
मिथिलाञ्चलमा जतरा पर्व मनाइँदै
परेवा संरक्षण गर्दै गाउँपालिका